I-Nano-Encasised Intranasal Vaccine Against I-Pneumoniae ene-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Izithwali zezidakamizwa ezenzelwe iNanoparticle zingubuchwepheshe obuguqukayo, obuvumela ukwakheka kwezinhlelo zokulethwa komjovo ngesilinganiso esiphakeme sokuvikela ezifweni ezahlukahlukene. I-Ultrasonic emulsation kanye ne-encapsulation kuyindlela ephumelela kakhulu yokulungiselela ukuthwala izidakamizwa e-nano-ehlelwe njengama-nanoparticles, ama-nanoparticles aqinile-lipid, abathwali bezidakamizwa be-polymeric, kanye ne-liposomes.
Ukuzuzwa kokugonywa kweNanoparticle-Encasnced S. pneumoniae Vaccines
Mott et al. (2013) inqume ukusebenza kokulethwa kwe-intranasal komgomo wokugomela we-234 ± 87,5nm poly lactic-co-glycolic acid nanoparticle owakhiwe ekwakheni isivikelo ekuthelelekeni kokutheleleka kokuphefumula kwe-pneumococcal. AmaNanoparticles ahlanganisa ukubulawa kwe-Streptococcus pneumoniae (NP-HKSP) okuboshwe ukushisa ngokugcinwa kwamaphaphu ezinsukwini eziyi-11 kulandela ukuphathwa kwamakhala kuqhathaniswa ne-NP engenalutho. Ukugonywa nge-NP-HKSP kukhiqize ukumelana okubalulekile okuphikisana S. pneumoniae ukutheleleka kuqhathaniswa nokuphathwa kwe-HKSP kuphela. Ukuvikelwa okwandisiwe okuhlangene nokukhula okukhulu kwempendulo ye-cytokine ye-antigen eqondene ne-IFN-c ye-cytokine yi-pulmonary lymphocyte. Lolu cwaningo lukhombisa ukusebenza ngempumelelo kobuchwepheshe obusekelwe kwe-NP njengendlela engavikeleki futhi ihlosiwe yokugoma kwe-nasal-pulmonary ngokumelene nokutheleleka kwe-pulmonary.
I-Protocol ye-Ultrasonic Nanoparticle Ukulungiselela
1×106 nanoparticles encapsulating ukushisa okubulawa ukushisa I-streptococcus pneumoniae (I-NP-HKSP) yadakwa yi-sonication ku-200µl we-phosphate-buffered saline (PBS), kwathi u-70 mg we-poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) wachithwa ku-1 ml we-ethyl acetate. Lezi zixazululo ezimbili zazixutshwe futhi zahlanganiswa ngejubane elikhulu le-1 min ukwakha i-emulsion yamanzi eyinhloko.
I-Double Emulsion Indlela: I-emulsion eyinhloko yabe ihlanganiswa ne-3 ml yesisombululo se-1% se-polyvinyl alcohol (PVA). Lesi sixazululo senziwe indodana sisebenzisa iprosesa ye-ultrasonic UP200H (I-Hielscher Ultrasonics GmbH, eJalimane) ngamamitha angama-40% we-2 min kumodi eqhubekayo (umjikelezo we-100%), engilazini ehlanzekile efakwa engilazini ye-ice for dissertation yokushisa, ukulungiselela i-HKSP encapsulating PLGA nanoparticles. Isixazululo saphinde safakwa ku-20ml ngamanzi a-autoclaved (i-0.22µ yokuhlunga inzalo) sanyuselwa nge-1 h ngokushisa kwegumbi ngaphansi kwe-vacuum emnene ukuze ikhiphe i-ethyl acetate. Isixazululo sabe sesilinganiswa ukuba kuqoqwe ama-NPs, futhi le nqubo yaphindwa kabili ukukhipha i-PVA eyeqile. I-nanoparticle pellet yabuye yavuselelwa ngo-500µl wamanzi agcwele usawoti futhi omiswe yiqhwa. Ama-nanoparticles okugcina agcinwe ngo-20 ° C kuze kusetshenziswe eminye.
Usayizi oyizinhlayiyana wabulawa ukushisa I-streptococcus pneumoniaeAma-nanoparticles we-PLGA ahlanganisiwe. Ubukhulu bezinhlayiya zokumiswa okumanzi kwama-nanoparticles alinganiswe ngokusabalalisa kokukhanya okukhombisa usayizi ojwayelekile nokusatshalaliswa kweGaussian kwezinhlayiya ebuntshini.
Umthombo: I-Mott et al .: Ukulethwa kokugoma kwe-nanoparticle okusekwe ngaphakathi kwe-nanoparticle kwandisa ukuvikela ekulweni S. pneumoniae. J Nanopart Res (2013) 15: 1646.
Ama-Ultrasonic processors wezokwenziwa kwemithi
Inzuzo ye-Ultrasonic PLGA Nanoparticle Ukulungiselela
Ukulawulwa okuqondile kwesayizi yezinhlayiyana nomthwalo
Izithwali Zezidakamizwa ze-Nano-Ehlelekile
Izithwali zezidakamizwa ezinesilinganiso esisezingeni eliphakeme njenge-nano-emulsions, liposomes, nanoparticles eqinile-polideric, nanoparticles, ne-nano-organised lipid zisetshenziselwa ukwakha amakhemisi ngemisebenzi eyithuthukisiwe enjenge-bioavailability ethuthukisiwe, ukwanda kwe-biocompatability, ukulethwa okuqondisiwe, igazi elihle impilo, futhi kunobuthi obuphansi kakhulu noma abukho ubuthi kwizicubu ezinempilo. I-Ultrasonication iyindlela ephumelela kakhulu yokwakha izinhlobo ezahlukahlukene ze-nanotherapeutics. Funda kabanzi mayelana nezicelo ze-ultrasonic ekukhiqizweni kwezemithi!
I-liposome iyi-vesicle ebunjiwe eyindilinga enama-bilayer okungenani ama-lipid, ahlanganisa umongo wezinto ze-hydrophobic. Kokubili, ubukhulu kanye nehlamvu le-hydrophobic ne-hydrophilic kuguqula i-liposomes ibe ngamasistimu wokulethwa kwezidakamizwa okunamandla, isib. I-liposomal vitamin C. Izici ze-Liposome zithonywa kakhulu ukwakheka kwe-lipid, ukushaja kobuso, usayizi, kanye nenqubo yokulungiselela. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokulungiswa kwe-liposomes kwe-ultrasonic!
Ama-Nanoemulsions noma ama-submicron emulsions angama-emulsions anosayizi we-droplet phakathi kuka-20-200nm nokusatshalaliswa kwe-Droplet emincane. Amaconsi asosayizi nano anikeza izinzuzo eziningana zokulawulwa komlomo kanye nokulethwa kokuxubeka / kokuhambisa ngokweqile kwezinto ezenziwe ngemithi kanye nezinto eziphilayo, isb nanoemulsions ye-CBD. Amaconsi asosayizi we-nano anamandla okuqeda kahle izidakamizwa ze-lipophilic kanye nezinga lokuncipha elithuthukisiwe lenza ama-nano-emulsions abe ifomu lokuqondisa elisetshenziswa kaningi ukuthola i-bioavailability ephezulu. Ama-formula we-Nano-emulsified angasebenza futhi ekukhishweni okweluliwe kwezidakamizwa ze-lipophilic noma hydrophilic.
Funda kabanzi mayelana nokukhiqizwa kwe-ultrasonic kwama-nano-emulsions!
I-lipid nanoparticle eqinile (SLN) iyi-nanoparticle eyindilinga enobubanzi obuphakathi kwama-nanometer ayi-10 kuye kwangama-1000. Ama-solop lipid nanoparticles ane-matrix eqinile ye-lipid core lapho ama-molecule e-lipophilic (izinto ezisebenzayo) angaxazululwa ukuze i-nanoparticle isebenze njengesithwali somuthi. Umgogodla we-lipid uqiniswa i-ejenti yokuqinisa noma i-survivant. Ngezicelo zokulawulwa kokubeletha nangomlomo kanye ne-ocular, i-pulmonary kanye ne-topical kwezidingo zemithi, ama-nanoparticles aqinile-we-lipid asetshenziselwa ukuqinisa ukusebenza kahle kwezokwelapha kanye nokunciphisa imiphumela emibi ehlelekile.
Funda kabanzi mayelana nokuqanjwa kwe-nanoparticles ye-ultrasonically-assist!
Izithwali ze-Lipano ze-Nano-Ehlelekile
Ifana ne-lipid nanoparticles (SLNs) eqinile, i-nano-ehlelekile ye-lipid carriers (NLCs) kungenye indlela yama-nanoparticles ase-lipid-based. Ama-lipid carriers we-Nano-ahlelwe nge-lipid (NLC) modified nanoparticles aqinile ahlanganisa ukuhlanganiswa kwama-lipid aqinile noketshezi futhi anikeza ukuqina okuthuthukile kanye nomthwalo wokulayisha.
Izithwali ze-lipid zeNano-ezihlelekile zingalungiswa nge-ultrason emulsion methdod.
I-Ultrasonic crystallization kanye nokuhanjiswa kwezulu kuyindlela enamandla kakhulu yokufaka izinto nge-solubility emanzi engemihle ibe yikristalu efakiwe. UZheng et al. (2020) babika ukuhanjiswa kwe-ultrasonic kwe-curcumin, indawo equkethe izinzuzo eziningi zezempilo, kepha i-bioavailability engeyinhle ngenxa yokusebenzisa amanzi kancane. Iqembu labacwaningi lenze ukwakheka kwe-nanoshell ye-polyelectrolyte (LbL) ukufaka ama-molecule we-curcumin. Besho ukuthi “[u] ngokungafani nezindlela ezisetshenziswa kakhulu ze-emulsion, ukuhanjiswa kwe-LbL yethu okusiza kakhulu nge-solb kungafinyelela ama-nanoparticles osayizi abancane kakhulu. Kwi-curcumin, sithole i-crystalline nanoparticles enobukhulu obulinganiselwa kuma-80 nm, kanye ne-ξ-engahle ibe ngu-+30 mV noma -50 mV, eqinisekisa ukuqina kwalezi nanocolloids izinyanga (zigcinwe kwisisombululo sezidakamizwa esigcwele). Ukwakheka kwamagobolondo ngamabhayidi amabili ama-polyelectrolyte anezinto ezimbili avumelekile ukukhishwa kancane kwezidakamizwa ngesikhathi samahora angama-20. "
Iphrothokholi ye-curcumin nucleation: I-Curcumin powder yachithwa kwisisombululo se-60% se-ethanol / samanzi. Ngemuva kokuchithwa ngokuphelele kwe-curcumin, ama-polycations amanzi, i-poly (allylamine hydrochloride), i-PAH, noma i-biodegradable protomine sulfate, (PS) yengeziwe. Ngemuva kwalokho, isixazululo senziwa sonwa nge-UIP1000, i-ulktrtrator enamandla eyi-1kW evela kuHielscher Ultrasonic, ku-100watts nge-mL yesisombululo. Ngesikhathi se-ultrasonication, amanzi ayengezwa kancane kusixazululo. Ngenxa yamanzi angeziwe, i-solvent iba polar xaxa, okunciphisa ukuncibilika kwe-curcumin. Lapho iqoqo lokulinganisa lidlula umkhawulo we-solubility th supresaturation we-curcumin litholakala bese i-crystal nucleation iqala. Ngaphansi kwe-ultrasonication enamandla amakhulu, ukukhula kwenhlayiyana yezidakamizwa kumiswa emabangeni okuqala.
Funda kabanzi mayelana nokuhanjiswa kwezulu kwe-ultrasonic kanye ne-crystallisation yama-nano-amakristalu!